Global Voices teny Malagasy » Midika ho fiverenan’ny voronkely tiana ny lohataona ao Japan · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 30 Avrily 2018 12:21 GMT 1	 · Mpanoratra Nevin Thompson Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Mediam-bahoaka, Tontolo_iainana, Vaovao Tsara
Isaky ny lohataona no andraisan'i Japan ny fiverenan'ny famonin'ny serizy (voarohy) , fahavokaram-bary , ny fielin'ny vovombony [mg]  — ary ny voronkely mpitelina eny an-tsompitra. Vahiny tonga soa eny amin'ny gara, sekoly, andohalambon'ny fivarotana na aiza na aiza azon-dry zareo ananganana akany ny voronkely mpitelina an-tsompitra.
Ho fanamarihana ny fanombohan'ny lohataona, nanangona ireo karazan-tsioka  fiarahabana ireo voronkely mpitelina tonga soa niverina ao Japan isaky ny volana avrily isan-taona ny Fundo, tranonkala japoney iray mpamory ireo sary-sy-soratra an'aterineto.
Vorona mpifindramonina mpandeha asara (andro mafana) any Filipina, Vietnam, Malayzia, Indonezia ary ny firenenkafa  ny mpitelina an-tsompitra (Hirundo rustica , fantatra ho ‘tsubame’ amin'ny teny japoney) mialoha ny hiverenan-dry zareo ao Japan isaky ny Aprily (hikotrika) hanorina akany. Tazamason'ny mpandeha fitateram-bahoaka ireo vorona ireo:
(Tama City News) Sehatra iray navelatra ambanin'ny akanim-borona iray hitatazana izay alatsany (ao amin'ny garan'i Keio Wakabadai ).
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/04/30/118780/
 famonin'ny serizy (voarohy): https://globalvoices.org/2016/04/03/japan-and-its-wonderful-cherry-blossoms/
 ny fielin'ny vovombony [mg]: https://mg.globalvoices.org/2017/04/25/97679/
 nanangona ireo karazan-tsioka: http://fundo.jp/135617
 mpandeha asara (andro mafana) any Filipina, Vietnam, Malayzia, Indonezia ary ny firenenkafa: http://www.yamashina.or.jp/hp/english/banding/birds_rings.html
 garan'i Keio Wakabadai: https://en.wikipedia.org/wiki/Wakabadai_Station